Home News Dowlada Turkiga ayaa diiday codsigii kaalmeynta daqliga dowladda Fedaraalka Somaliya
Dowladda Turkiga oo si joogta ah u taageeri jirtay dowlada Somaliya iyada oo kabaysa daqliga dowlada ayaa ka gaabsatay in ay dib u bilaawdo lacagtii labada Milyan ee bishii ay ku taageeri jirtay daqliga Dolwada Somaliya. Wasiirka Maaliyada Dowlada Soomaliya oo kulan daqiiqido yar qaatay la yeeshay wasiirka maaliyadda Turkiga xiligii uu la safray MW Farmaajo ayaa loo sheegay in dowlada Turkiga ay dib ula soo xiriiri doonto dowlada Soomaliya. Dowlada Turkiga ayaa in mudo ka cagajiidaysay in ay taageerto dowlada Somaliya iyada oo ku eedeysay Xukuumadda Kheyre in la musuqay lacagtii ay sida walaaltinimada ah ugu deeqday Somaliya. Waxaa sidoo kale nasiib xumo ah in Somaliya lacag weydiisato dowladda Turkiga iyada oo dowladaas uu ku socdo dagaal dhaqaale.
Previous articleXog: Qatar oo qorsho halis ah la damacsan sidii shacabka Soomaaliyeed loo caburin lahaa
Next articleDawlada Itoobiya Oo waxay maanta oo Sabti aheyd ka qaaday Xanibaadii Internet-ka Ee La Saaray Deegaanka Soomaalida Itoobiya.